Lacag garayso 10,000 dhismaha Safaradda Soomaaliya ee dalka Uganda —
Home » Lacag garayso 10,000 dhismaha Safaradda Soomaaliya ee dalka Uganda
Lacag garayso 10,000 dhismaha Safaradda Soomaaliya ee dalka Uganda
Midowga ganacstada Soomaaliyeed ee qalabka dhismaha ee dalka Uganda iyo Koonfurta Suudaan ayaa maanta deeq lacageed oo ay kaga qeyb-qaadanayaan dhismaha Safaradda Soomaaliya ee dalka Uganda waxay ku wareejiyeen Safaradda Soomaliya ee dalka Uganda.
Deeqdaas lacageed ee maanta lagu wareejiyey safaaradda Uganda waxay gaareysay 10,000 oo dollarka Maraykanka ah.
Xaflad kooban oo ay deeqda lacageed ku wareejinayeen ganacsatada ayaa ka dhacday magalada Kampala, waxaana ka qeyb galay Safiirka Soomaaliya ee dalka Uganda Amb. Cali Maxamed Maxamuud iyo la-taliyaha 2-aad ee Safaradda Cali Khadar.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Uganda Amb. Cali Cagabaruur oo hadal kooban ka jeediyay xafladda ayaa uga mahadceliyay ganacsatada deeqda lacageed oo soo gaarsiiyen Safaradda, taas oo wax badan ka tari doonta dib u dhiska Safaradda oo maraya meel muhiim ah.